प्रियांका कार्कीलाई अष्ट्रेलियाबाट दर्शकको खुलापत्र - Himalayan Kangaroo
प्रियांका कार्कीलाई अष्ट्रेलियाबाट दर्शकको खुलापत्र
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ बैशाख २०७३, सोमबार ०४:४७ |
नेपालीकी प्यारी नायिका प्रियंका, असिम माया । हिजो तिम्रो फेसबुकको स्टेटस् पढेपछि मन थाम्नै सकिनँ । नराम्रोसँग चित्त दुखाईछौ । तिम्रा फ्याननै भनौ न केही मान्छेले अपशव्द प्रयोग गरेर कमेन्ट गरेछन् ।मैले पनि सर्सर्ती पढें । सालाखाला छानेर पढें । सवै कमेन्टहरु पढ्ने त्यति धेरै समयपनि थिएन मलाई । हो! तिमी नेपाली रजतपटकी केही सम्भावना बोकेकी नायिका हौ,त्यसमा कुनै दुई मत छैन । तिमी नेपाली चलचित्रलाई चाहिने एउटा सिङ्गो प्याकेज हौ यस अर्थमा कि तिमीमा अभिनय,नृत्य र पटकथामा डुब्ने खुबी छ । मैले पनि तिम्रा केही चलचित्र हेर्ने मौका पाएको थिएँ। एउटा नायिकामा हुनुपर्ने सबै तत्व तिमीमा छ । जसको कारणपनि होला तिमी अहिलेकी सवैभन्दा व्यस्त नायिकामा पर्छौ । तिम्रो अभिनयको सवै नेपाली दर्शकले मुक्तकण्ठले प्रशङ्सा पनि गर्ने गरेका छन् । राम्रो व्यानरका चलचित्रमा तिम्रो बाहुल्यता रहेको नाई नभन्नु ल, वडा नम्बर ६ बाट पनि प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो समाज परिवर्तन भईसक्यो,अव कितावका पन्नामा मात्र सीमित होला नेपाललाई पुरुषप्रधान देश भनेर । धिक्कार छ त्यसलाई जसले यो २१ औं शताव्दीमा आएर पुरुष र महिलामाथि भेदभाव राख्छ । आज कसैको लिङ्गले समाजलाई केही फरक पार्दैन । उसको कामले मुल्य र मान्यता राख्छ । नारीहरु भनेको घर भित्र मात्र सीमित हुनुपर्ने मान्यता त्यस्ताले राख्छन् जसलाई संसार कहाँ पुग्यो केही थाहा हुँदैन । आज हाम्रा चेलीहरु अनुराधा कोईराला, पुष्पा बस्नेत बनेका छन् जसले बिश्वमा नेपाललाई चिनाए । साहित्यकार झमक कुमारीलाई हेरेर नि पाठ सिक्नपर्ने हो पुरुषप्रधान देशको घमन्ड गर्नेहरुले । कलाकार देशका गहना हुन् । कलाकारको मान सम्मान गर्नु सवै नेपालीको कर्तव्य हो ।
आज हाम्रा चेलीहरु अनुराधा कोईराला, पुष्पा बस्नेत बनेका छन् जसले बिश्वमा नेपाललाई चिनाए ।
हो, तिमी क्षमतावान, बहुप्रतिभा भएकी र बिश्व सिनेमा नगरीमा नेपाली कलाकारितालाई प्रवद्र्धधन गर्न सक्ने क्षमता भएकी अहिलेको सबै भन्दा बढि सम्भावना बोकेकी नायिकामा पर्छौ । त्यसता झिना मसिना कुरामा रुमल्यौ भने तिम्रा लम्केका पाईलाहरुमा ठेस आउन सक्छ । तिमी कति पनि बिचलित हुनु हुन्न । समाजमा दुबै सभ्य र असभ्य प्रबृतिका मान्छेहरु हुन्छन् । राम्रा र आफ्नाको मात्र आत्मसाथ गर्नु पर्छ, नराम्रा र परचक्रीहरुको बेवास्ता गर्दा नै तिम्रो भलो हुन्छ । फोहोरी गाली र वाहियात कुराले तिम्रो नेपाली चेली मन दुखाउनु स्वभाविक हो । तर यस्ता घृणित कुराबाट कुनै बिचलित नभईकन झन् सशक्त भएर हिड । अरुको कुरामा नलागिकन आफ्नो कर्ममा अडिग भएर हिँड । दुई चारजना होलान तिमीलाई नराम्रो सोच्ने तर तिम्रो हक हित भलो र प्रगतिको कुरा सुन्ने तिम्रा लाखौ फ्यानहरु छन्,जसले तिम्रो कामको मुक्तकण्ठले तारिफ गर्छन् ।
फोहोरी गाली र वाहियात कुराले तिम्रो नेपाली चेली मन दुखाउनु स्वभाविक हो । तर यस्ता घृणित कुराबाट कुनै बिचलित नभईकन झन् सशक्त भएर हिड । अरुको कुरामा नलागिकन आफ्नो कर्ममा अडिग भएर हिँड ।
सामाजिक सन्जालको बढ्दो लोकप्रियता सँग सँगै यसको उपयोग र दुरुपयोग अत्याधिक मात्रामा बढेको छ । कसैलाई गालीगल्लौज गर्न सजिलो बनेको छ,फेसबुक । समाजमा भएका नकरात्मक मानसिकता भएका मानिसहरुको घृणीत सोचको उपजका कारण आज सबैजसो सेलीव्रेटी देखी सर्वसाधारणले तिमीले भोगेको कुरा भोग्दै आएका छन् । आज तिमीलाई जसले नराम्रो भन्यो उसैले बन्ध कोठामा लुकेर अश्लिल चलचित्र हेरिरहेका होलान् । अविवेककशील मान्छेको दिमागले जति सोच्छ त्यही उसले देखाउने हो । कलाकारलाई चिनाउने उसको सुन्दरता र प्रतीभाले हो,उसको शालीनताले हो । कसैले नराम्रो भनेर कोही पनि नांगिदैन । त्यसैले तिमी आफ्नो काममा निरन्तर कटिबद्द भएर लागि पर । अझ आफ्नो कामलाई निखारता दिदै जाउ ।
कलाकारलाई चिनाउने उसको सुन्दरता र प्रतीभाले हो,उसको शालीनताले हो । कसैले नराम्रो भनेर कोही पनि नांगिदैन । त्यसैले तिमी आफ्नो काममा निरन्तर कटिबद्द भएर लागि पर ।
अन्त्यमा कला भनेको कुनै शारीरिक अङ्गले भन्दा उ भित्रको कलाकारिताले झल्काउँछ,यो कुरालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ । एउटा कुरा के चाँहि नबिर्स भने तिमी नेपाली रजतपटकी नेपाली नायिका हौ । नेपाली समाजलाई पच्ने र नेपालीपन झल्किने अभिनय गर । जसले गर्दा कोही कसैले औला ठड्याउन नसकुन् । उहि तिम्रो भलो चिताउने ‘दर्शक’ मनोज पौड्याल
Previousराजदूत नेपाललाई अष्ट्रेलिया निवासी नेपाली समुदायको विदाइ तथा सम्मान
Nextश्रीकृष्णको नेतृत्वमा ‘आइएनएस’को भिक्टोरिया शाखा गठन
के छ नेपालको संविधान २०७२ मा ?
३ आश्विन २०७२, आईतवार १७:१२
जीवनलाई कसरी खुशी र तन्दरुस्त राख्न सकिन्छ ?
१३ चैत्र २०७१, शुक्रबार १०:२४
लोकमानविरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिउ
८ कार्तिक २०७३, सोमबार ०६:४७